FAQ - Learn to Speak English Online
​မေး...Safety နဲ့ Security ဘာကွာပါသလဲ ဆရာ
​ဖြေ.......နှစ်ခုလုံးက အန္တယာယ်အထွေထွေကနေလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။Safety ဆိုတာက အန္တယာယ်တွေကိုအကာကွယ်ပေးခံထားရတဲ့အခြေနေအရပ်ရပ်ကိုဆိုလိုပါတယ်။Security ဆိုတာက...အန္တယာယ်အသွယ်သွယ်ကနေဝေးကွာလွတ်ကင်းအောင်လုပ်တဲ့အခြေနေကိုဆိုလိုပါတယ်။I am worried about the safety of the children.( ခလေးတွေလုံခြုံမူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မိတယ်)There was tight security for the people's visit.( လာရောက်လည်ပတ်တဲ့သူတွေအတွက်လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတယ်)နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်Security ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက် Safety ဖြစ်ပါတယ်။
မေး...What book did you buy? နဲ့ Which book did you buy?အဓိပ္ပါယ်ဘာကွာခြားပါသလဲဆရာ။
​ဖြေ.....What + noun ကို - အထွေထွေသဘောစုံစမ်းမေးမြန်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်။ Which + noun ကို ကန့်သတ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်...ဥပမာနဲ့ယှဉ်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်။What book did you buy? ဆိုတာက ( ဘာစာအုပ်ဝယ်ခဲ့လဲ )စာအုပ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပဲရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်။ ဘယ်အရာဆိုတာပိုင်းခြားရည်ညွှန်းတာမရှိဘူး။ အမေးခံရတဲ့သူက ( အမေးမခံရခင် )စာအုပ်ဝယ်မယ်ဆို ထွက်သွားတယ်ဆိုပါစို့...ပြန်လာတော့အမေးခံရတယ်..What book did you buy?(ဘာစာအုပ်ဝယ်ခဲ့လဲ)စာအုပ်ဝယ်တဲ့သူက ( စာအုပ်သွားမ၀ယ်ခင်မှာ) သူကပြောမယ်......ဒီနေ့ ဦးဖြူ စာအုပ်နဲ့ ဦးနီစာအုပ်ထွက်တယ်ပြောတယ်..ငါသွားဝယ်မလို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာ အမေးခံရတယ်............။Which book did you buy? ( ဘယ်စာအုပ်ဝယ်ခဲ့လဲ )...ဦးဖြူနဲ့ ဦးနီစာအုပ်နှစ်အုပ်ထွက်တဲ့အထဲက..ဘယ်စာအုပ်ဝယ်ခဲ့လဲ။What noun - အထွေထွေစုံစမ်းမေးမြန်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။Which noun - ကန့်သတ်ရွေးချယ်တာကိုမေးချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။ ​မေး.....ဆရာ warranty နဲ့ guarantee ကွာခြားပုံကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ဆရာ
​ဖြေ...warranty ဆိုတာက ကုန်ပစ္စည်းအတွက်အာမခံတာ..ဥပမာ..ရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်း ဘယ်နှစ်လမှာပျက်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးမယ်။ .စသဖြင့်ပေါ့။Guarantee ဆိုတာက အရောင်းအ၀ယ်၊အပေးအယူကို အာမခံတာ...။ဥပမာ..ဒီပစ္စည်းကိုသုံးရင် ဘယ်လိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းရမယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆို..ဘာလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုး
​မေး...ဆရာ Duest in the wind သီချင်းမှာAll we are is dust in the windဆိုပြီး ဘာဖြစ်လို့ are ရယ် is ရယ်ကို ဆက်ပြီး သုံးထားတာလဲ သိပါရစေ။
ဖြေ....ဒီလိုသုံးတာဟာ...Noun Clause တည်ဆောက်ပုံဖြစ်ပါတယ်.......ဒီစာကြောင်းကို လေ့လာမယ်ဆိုရင်..All we are ဆိုတာ ( Sub ) ဖြစ်တယ်ပြည့်စုံတဲ့ စာကြောင်း ( Sentence ) မဟုတ်ဘူး...Clause ဖြစ်တယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Noun Clause ဖြစ်တယ်။ နောက်က is က ပဓါန ကြိယာ ( Main Verb )ဖြစ်တယ်။ All we are က သပ်သပ်...is က သပ်သပ်ဖြစ်တယ်။ Noun Clauseအကြောင်းကို နားလည်သဘောပေါက်အောင်လေ့လာလိုက်ပါ။ မေး…ဆရာရှင့်​No Way နဲ့ impossible အသုံးခြားနားပုံသိချင်​ပါတယ်​ရှင့်​ရှင်းပြ​ပေးပါဦးရှင့်​ ရို​သေစွာဖြင့်​
​ဖြေ…no way ဟာ Idiom အသုံးဖြစ်သလို Informal လည်းဖြစ်ပါတယ်။interjection of amazement. ( အံ့သြတဲ့အခါသုံးတဲ့ အမေဋိတ် )You boughtacar last week, didn’t you?( ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ကားဝယ်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား )Oh, no way. ( အိုး…မဟုတ်တာ )interjection of doubt.( သံသယဖြစ်တဲ့အခါသုံးတဲ့ အမေဋိတ် )Mr Steve has been arrested.( မစ္စတာ စတိဗ်..အဖမ်းခံလိုက်ရပြီ )No way, No way.( မဟုတ်တာကွယ်….မဟုတ်တာ )an emphatic "no". ( No ကိုအလေးအနက်ပြတ်ပြတ်ပြောချင်တဲ့အခါ )Person A: Do you want to go to the party?( ပါတီပွဲကိုသွားချင်လား )Person B: No way. My ex is going to be there.( မသွားပါဘူး….ငါ့ ရည်းစားက အဲဒီ့မှာရှိလိမ့်မယ် )---------------------------------------------------------------Impossible ဆိုတာကတော့ Adjective ( နာမ၀ိသေသနဖြစ်ပါတယ် )I am impossible to help you. ( ခင်ဗျားကိုကူညီဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး )